Imidlalo kunye neMibongo -Iphefumlelwe yimidlalo
Imidlalo kunye nemibongo
Imidlalo kunye neMibongo iPodcast
Iincwadi ze-e ezipapashiweyo
Guqula imenyu esezantsi
IiPirates zaseGravitae inyathelo
I-Rebound-I-Puzzle Adventure Imidlalo kunye nemibongo
I-White Owls Inc. Umphuhlisi womdlalo
Ukuhambisa iwele Umphuhlisi womdlalo
Iqela lomdyarho weqela Imidlalo kunye nemibongo
Inkampani yeHakama Inc. Umphuhlisi womdlalo
Yiwa ngoNcanda Adventure
IiStudios zomdlalo weVarsav
ezaposwa ngomhla 15. Meyi 2022 14. Fe bruwari 2022 By UClaudia Wendt	Andinamazwi kwiiStudios zoMdlalo weVarsav
I-Varsav Game Studios yi studio esekwe kwi-2016 enabasebenzi abangama-40. Isebenza ngokukodwa ekuphuhliseni imidlalo ngokwembono eyahlukileyo-igxile kubuchwephesha obungaqhelekanga kunye nabalinganiswa abaphambili abakhethekileyo. Imveliso yokuqala yesi studio, iBee Simulator, yakhutshwa ngaxeshanye nge-14 kaNovemba ka-2019 kwiPC, iPlayStation 4, iXbox One kunye neNintendo switch…
Funda Okuninzi "Izitudiyo zoMdlalo zaseVarsav" »
Iinkumbulo zibaliswa kwakhona
ezaposwa ngomhla 15. Meyi 2022 By UClaudia Wendt	Andinamazwi kwiiNkumbulo eziBaliswa ngokutsha
IMemories Retold ichaza ibali leMfazwe Yehlabathi I, eyaphela ngoNovemba 11, 1918. Umdlalo sisibongozo soxolo. Iinkumbulo Ziphinde Zibaliswe Amajoni ambalwa azama ukuzihlaziya ngomculo othile. Umntu ebedlala isiginci kanti umfo weIndiya kule nkampani usanda kudibana naye uyadanisa. Kuvakala...
Funda Okuninzi “Iinkumbulo Ziphinde Zixelwe” »
Hard West 2: Khupha ngo-2022
ezaposwa ngomhla 15. Meyi 2022 15. Meyi 2022 By UJosefina Meloney	Andinamazwi ukuya Hard West 2: Khupha 2022
I-Wild west idibana noloyiko. Kumdlalo odlala indima edlala iHard West 2, ulindelwe uninzi lokufika kunye nabachasi, abangasoloko bengumntu ngokwendalo. Kweli nqaku, sikuxelela ukuba ulindele ntoni kwi-sequel. Uthatha indima yesihange uGin Carter, isihange esiyingozi nesidume kakubi. Xa uGin esiva ukuba uloliwe osisiporho ophethe...
Funda Okuninzi "Hard West 2: Khupha ngo-2022" »
Imidlalo kunye nemibongo, iindaba
ezaposwa ngomhla 14. Meyi 2022 14. Fe bruwari 2022 By UClaudia Wendt	Andinamazwi kwiZixholoxholo zokuVukela
I-Giants Uprising ikuvumela ukuba ubaleke ekuthinjweni njengesigebenga. I-Varsav Game Studios yeza nomboniso wesenzo. Ukuziphindezela ebantwini Injongo yakho njengesigebenga yimpindezelo ebantwini. Bazikhobokisa izigebenga kwaye njengengxilimbela ufumana impindezelo yakho. Uzinyathele, uzityumze, uzityumze ezo zincinane zibalekayo. Uyatshabalalisa...
Funda Okuninzi "Ukuvukela okukhulu" »
ezaposwa ngomhla 13. Meyi 2022 By UClaudia Wendt	Andinamazwi kwiLizwe Elihlebezayo
Ihlabathi Elihlebezayo est un merveilleux jeu de conte de fées du développeur Daedalic.
Funda Okuninzi "Ihlabathi Elihlebezayo" »
Ithunyelwe ngu-2019-04-26 14:19:04.
Iziseko ziLayishwe 4
ezaposwa ngomhla 13. Meyi 2022 11. Fe bruwari 2022 By UClaudia Wendt	Andinamazwi kwiziseko eziLayishiweyo 4
Iziseko eziLayishwayo i-4 ayikho enye into ngaphandle kokuphunyezwa okuphuculweyo kwecandelo lesithathu. Kwakhona yapapashwa kwangaloo nyaka njengenxalenye yesithathu. Umdlalo sisithsaba sozuko kwiziseko ezilayishiweyo imidlalo ekhululwe kwi-NES kwaye izisa inani lophuculo. I-baseball yesine-Iziseko eziLayishwayo ezi-4 iziseko eziLayishwa 4 yi...
Funda Okuninzi "Iziseko ziLayishwe 4" »
Ukusebenza noMqokeleli weNkumbulo
ezaposwa ngomhla 13. Meyi 2022 By UClaudia Wendt	Andinamazwi ukusebenza kunye neProfayili yeMemori
I-Memory Profiler yiphakheji entsha ye-Unity 2018.3 okanye kamva evumela ukuba uhlalutye ukusetyenziswa kwememori yeprojekthi ukufumana ukuvuza kwememori kunye nokwahlula. Ukuvuza kwememori kunokwenzeka xa imemori inikezelwe kodwa ingaze yabelwe ukuba isetyenziswe kwakhona emva kokuba imemori ingasafuneki. Kule tutorial, uya kufunda indlela...
Funda Okuninzi "Ukusebenza kunye neProfayili yeMemori" »
UkuBuyisa okuPhakade – Ukusinda kwabaMnyama
ezaposwa ngomhla 13. Meyi 2022 13. Meyi 2022 By UClaudia Wendt	Andinamazwi ukuBuyisa ngoNaphakade - Ukusinda kwabaMnyama
Ukubuya kwanaphakade: Ukusinda kwabamnyama ngumdlalo wedabi elinempembelelo enamandla ye-MOBA. Yakha kumdlalo wangaphambili ongafiyo uMphefumlo: Ukusinda kwabaMnyama ngumphuhlisi weNimble Neuron. Abazaziyo bakudala kwimbuyekezo engunaphakade Umdlalo usebenzisa abalinganiswa abafanayo, izinto, kunye neendawo ezisetyenzisiweyo ngokutsha kwi-MOBA esezantsi ezivayo ngezakhono kunye nezibalo ezongezelelweyo. Yongeza i-duo kunye neendlela zeqela ...
Funda Okuninzi “UkuBuyela ngonaphakade-Ukusinda kwabaMnyama” »
ezaposwa ngomhla 12. Meyi 2022 13. Meyi 2022 By UClaudia Wendt	Andinamazwi ukuya kwiMidlalo ye-Epopeia
Imidlalo ye-Epopeia sisitudiyo somdlalo waseBrazil esele iyimidlalo yenkqubo ukusukela ngo-2010. Omnye wemidlalo yabo yi-Mega Monster Party. Epopeia Imidlalo imidlalo Gaucho kunye Grassland Outland Rapture IIN Mega Monster Party Goroons Yiya kwiwebhusayithi yomphuhlisi
Wallace kunye neGromit
ezaposwa ngomhla 12. Meyi 2022 13. Meyi 2022 By UClaudia Wendt	Andinamazwi kuWallace kunye noGromit
Kule post ndinikezela ngombono weWallace kunye neGromit imidlalo. UWallace kunye noGromit Wallace kunye noGromit ngabadlali abaphambili kuthotho lweeanimated ze-Nick Park zegama elifanayo. Wazivelisa ngenkampani yakhe iAardman Animations. Amanani ayenziwe iPlasitlin kwiifreyimu ezijikelezayo. Oopopayi benziwa kusetyenziswa indlela yokuyeka intshukumo eyaziwa ngokuba yiclaymation. Wallace...
Funda Okuninzi "UWallace kunye noGromit" »
1 2 ... 155 elandelayo
Abasebenzisi namhlanje: 17
Abasebenzisi Izolo: 107
Iimbono ezipheleleyo: 56940
Ixhaswe ngu Ikhawuntara yeNdwendwe yeWPS
Iindawo zokudlala ezicetyiswayo (5)
Imidlalo kunye nemibongo (1.335)
Imidlalo yebhodi (4)
Ilahleko yeMidlalo eKona (2)
imidlalo yomculo (1)
Inoveli ebonakalayo (4)
Into efihliweyo (4)
Umphuhlisi womdlalo (60)
Inkqubo yomdlalo (97)
Uyekile ukusebenza! Undwendwelo lwakho kule webhusayithi alusayi kuphinda lushicilelwe luhlalutyo lwewebhu. Nceda uqaphele ukuba iMatomo deactivation cookie kule webhusayithi nayo iya kucinywa ukuba ususa iikuki ezigcinwe kwisikhangeli sakho. Ukongeza, ukuba usebenzisa ikhompyuter eyahlukileyo okanye isikhangeli sewebhu, kuya kufuneka uphinde uphume kwinkqubo kwakhona.
Unenketho yokuthintela izenzo ozenzayo apha ukuba zihlalutywe kwaye zidityaniswe. Oku kuya kukhusela ubumfihlo bakho, kodwa kuya kuthintela umniniyo ekufundeni kwizenzo zakho kunye nokuphucula ukusetyenziswa kwakho kunye nabanye abasebenzisi.
Utyelelo lwakho kule webhusayithi okwangoku lushicilelwe luhlalutyo lwewebhu yeMatomo. Sukukhetha le bhokisi yokujonga ukuphuma. Utyelelo lwakho kule webhusayithi okwangoku alubhalwanga luhlalutyo lwewebhu yeMatomo. Vula le bhokisi yokukhangela ukungena.
Umsebenzi wokuphuma wokulandela umkhondo ufuna iikuki ezivuliweyo.
Ngaba ujonge umdlalo?
inyathelo Adventure Capcom Daedalic Ukuzonwabisa kweDaedalic Ikhonkco 13 I-Devcom 2020 Ilahleko yeMidlalo eKona Igumbi lokuPhupha I-Gamescom 2019 I-Gamescom 2020 I-Gamescom 2021 GB I-GBA I-GBC Imidlalo yeHaemimont Imidlalo yeHaiku inyumnyezi Tsiba kwaye ubaleke Imithombo yeendaba yeKalypso Man Mega N64 NDS NES I-Nintendo DS Nintendo Tshintshela PC PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PSP Izinto ezinqabileyo Umdlalo womdyarho RPG Sega shooter SNES Isicwangciso iswitshi ubunye Inoveli ebonakalayo Xbox I-XBox enye
Umbhalo weMessage Pro 14 izimvo
Ukukhanya kwe-2D kunye nesithunzi kubunye 13 izimvo
Yintoni uMthengisi weSprite? 12 izimvo
IiStudios zomdlalo weVarsav 10 izimvo
I-Ace yokulwa kwangaphambili 9 izimvo
izilo zebhaluni 8 izimvo
Hard West 2: Khupha ngo-2022 8 izimvo
I-White Owls Inc. 8 izimvo
Ukubaleka: Ukhenketho lwendlela 7 izimvo
Ukubopha - I-balrealina yeSurreal 7 izimvo
Ngamana 2022 (36)
Matshi 2022 (95)
Disemba 2021 (60)
Agasti 2021 (88)
Ngamana 2021 (48)
Disemba 2020 (56)
Agasti 2020 (64)
Ngamana 2020 (60)
Matshi 2020 (28)
Into Elandelayo Enkulu Adventure
Umfanekiso ogqibeleleyo-Ubaleko lokuZonwabisa Adventure
ITransistor Imidlalo kunye nemibongo
Ukukhanya kwesole Imidlalo kunye nemibongo
I-3 × 3 Amehlo: UJuuma Houkan Imidlalo kunye nemibongo
Isitudiyo sasemzini Umphuhlisi womdlalo
World of Tanks Imidlalo kunye nemibongo
UKumkani omdaka Imidlalo kunye nemibongo
Copyright © 2022 Imidlalo kunye neMibongo.
zeSITA PressBook News Umxholo omnyama
Le webhusayithi isebenzisa ikuki ukuphucula amava omsebenzisi. Ungazicima ezi cookies apha.
Lewebhusayithi isebenzisa ikhukhi ukuphucula amava akho. Sizakucinga ukuba ulungile nento, kodwa unako ukuphuma xa ufuna. Useto lweKukiYAMKELA / YAMKELA
Useto lwabucala kunye necookie
Ulwazi malunga neicookies / isishwankathelo sabucala
Le webhusayithi isebenzisa iikuki ukuphucula ukusebenza kunye namava omsebenzisi. Kukho iindidi ezimbini zeekuki: Eziyimfuneko zigcinwa kwisiphequluli kwaye zibalulekile ekusebenzeni okuchanekileyo kwewebhusayithi. Iikuki ezingeyomfuneko okanye zomntu wesithathu ezisetyenziselwa ukuhlalutya kwaye zisibonisa ukusetyenziswa kwale webhusayithi. Ezi cookies zikwagcinwa kwibhrawuza, kodwa kuphela ukuba uyayivumela ngokucacileyo. Koku kulandelayo, unokhetho lokuthintela ezi cookies zomntu wesithathu. Ukucima ezi kuki kunokuchaphazela ukuziphatha kwewebhusayithi.
IINKCUKACHA iintsuku 7 Le cookie ilawulwa yiAmazon Web Services kwaye isetyenziselwa ukulinganisa umthwalo.
umxhasi_id iminyaka 10 Le kuki isetyenziselwa ukudlulisa ulwazi lwesiqinisekiso.
Cookielawinfo-ibhokisi yokukhangela-yentengiso 1 kunyaka Isetwe yi-plugin ye-GDPR ye-Cookie Consent, le khukhi isetyenziselwa ukurekhoda imvume yomsebenzisi kwiikuki kwicandelo "Intengiso".
Cookielawinfo-ibhokisi yokujonga-uhlalutyo 1 kunyaka Isetwe yi-plugin ye-GDPR ye-Cookie Consent, le khukhi isetyenziselwa ukurekhoda imvume yomsebenzisi kwi-cookies kwicandelo elithi "Analytics".
Cookielawinfo-ibhokisi yokukhangela-esebenzayo 1 kunyaka I-cookie isethwe yi-plugin ye-GDPR ye-Cookie Consent ukurekhoda imvume yomsebenzisi kwiikuki kwicandelo elithi "Iyasebenza".
cookielawinfo-ibhokisi yokujonga-eyimfuneko 1 kunyaka Isetwe yi-plugin ye-GDPR ye-Cookie Consent, le khukhi isetyenziselwa ukurekhoda imvume yomsebenzisi kwiikuki kwicandelo "Kuyimfuneko".
cookielawinfo-ibhokisi yokujonga-engadingekile 1 kunyaka Isetwe yi-plugin ye-GDPR ye-Cookie Consent, le khukhi isetyenziselwa ukurekhoda imvume yomsebenzisi kwiikuki kwinqanaba elithi "Akukho mfuneko".
Cookielawinfo-ibhokisi yokujonga-abanye 1 kunyaka Isetwe yi-plugin ye-GDPR ye-Cookie Consent, le cookie isetyenziselwa ukugcina imvume yomsebenzisi kwiikuki kwicandelo elithi "Ezinye".
Cookielawinfo-ibhokisi yokukhangela-yokusebenza 1 kunyaka Isetwe yi-plugin ye-GDPR ye-Cookie Consent, le khukhi isetyenziselwa ukugcina imvume yomsebenzisi kwiikuki kwicandelo elithi "Performance".
CookieLawInfoCentent 1 kunyaka Irekhoda imeko yeqhosha elingagqibekanga lodidi oluhambelanayo kunye nobume beCCPA. Isebenza kuphela ngokubambisana necookie yokuqala.
EzCMPCCS 1 kunyaka I-Ezoic ibeka le cookie ukuba ilandele xa umsebenzisi evuma kwi-cookies yezibalo.
Zonke iikuki ezingafunekiyo ngokuthe ngqo ukuze iwebhusayithi isebenze ngokufanelekileyo kwaye isetyenziselwa ukuqokelela idatha yomsebenzisi ngohlalutyo, intengiso, okanye omnye umxholo ofakwe ngaphakathi zibizwa ngokuba ziicookies ezingeyomfuneko. Kunyanzelekile ukuba ufumane imvume yomsebenzisi phambi kokuba ezi cookies zisetyenziswe. Ukuba imvume yokusetyenziswa kweekuki ayinikwanga, aziyi kusetyenziswa kwaye kuphela iikuki eziyimfuneko ziya kusebenza.
__qca Unyaka o-1 iintsuku I __qca cookie inxulunyaniswe ne Quantcast Le datha engaziwa isinceda ukuba siqonde ngcono iimfuno zabasebenzisi kwaye senze iwebhusayithi ngokufanelekileyo.
euds iseshoni Le cookie imiselwe yiRocket Fuel kwintengiso ekujoliswe kuyo ukuze abasebenzisi baboniswe iintengiso ezifanelekileyo.
i iminyaka 10 Le kuki isetwa yi-OpenX ukurekhoda idatha yomsebenzisi engaziwa, njengedilesi ye-IP, indawo yendawo, iiwebhusayithi ezityelelweyo, iintengiso ezicofayo ngumsebenzisi, njl., ukwenzela intengiso efanelekileyo.
mc Unyaka o-1 inyanga I-Quanserve ibeka i-cookie ye-mc ukuba ilandele ngokungaziwa ukuziphatha komsebenzisi kwiwebhusayithi.
ubuqhetseba Unyaka o-1 iintsuku I-rud cookie yeye-Rocketfuel kwaye ibhalisa idatha yomsebenzisi, efana nedilesi ye-IP, indawo, njl.njl. ngenjongo yokwandisa umboniso wentengiso.
imiqobo iseshoni Le cookie yeyeRocketfuel kwaye iqokelela iinkcukacha zabasebenzisi abangazichazanga igama lakho kubaphulaphuli ekujoliswe kubo kwaye ikhuphe iintengiso ezenzelwe wena.
yt.innertube::i-Id elandelayo ze Le kuki, isetwe nguYouTube, ibhalisa isazisi esisodwa ukugcina idatha malunga neevidiyo ezibonwe nguYouTube umsebenzisi.
yt.innertube::izicelo ze Le kuki, isetwe nguYouTube, ibhalisa isazisi esisodwa ukugcina idatha malunga neevidiyo ezibonwe nguYouTube umsebenzisi.
Iikuki ezisebenzayo zisetyenziselwa ukwenza imisebenzi ethile efana nokwabelana ngolwazi kumaqonga eendaba ezentlalo, ukuqokelela ingxelo kunye neminye imisebenzi yomntu wesithathu.
Pll_language 1 kunyaka I-cookie ye-pll _language isetyenziswa nguPolylang ukukhumbula ulwimi olukhethwe ngumsebenzisi xa ebuyela kwiwebhusayithi, kunye nokufumana ulwazi lolwimi xa lungekho ngenye indlela.
Iikuki zohlalutyo lwentsebenzo zisetyenziselwa ukuhlalutya kunye nokuqonda imiba ephambili yokusebenza. Oku kunceda ngokuqhubekayo ukuphucula iwebhusayithi kwaye ngaloo ndlela unike iindwendwe amava alungileyo omsebenzisi.
I-AWSALB iintsuku 7 I-AWSALB yi-cookie yomthwalo we-balancer yesicelo esetwe yi-Amazon Web Services ukwenza imephu yeseshini kwithagethi.
ezds iminyaka 7 Ikuki ye-ezds isetwe ngumboneleli we-Ezoic, kwaye isetyenziselwa ukugcina ubungakanani bepixel yesikhangeli somsebenzisi, ukwenza amava omsebenzisi afaneleke kwaye uqinisekise ukuba umxholo uyalingana.
ezoab_1034 iiyure 2 I-Ezoic isebenzisa le cookie ukwahlula uvavanyo lweempawu ezahlukeneyo kunye nokusebenza.
ezinyehw iminyaka 7 I-cookie ezohw ibekwe ngumboneleli we-Ezoic, kwaye isetyenziselwa ukugcina ubungakanani bepixel yesikhangeli somsebenzisi, ukwenza amava omsebenzisi kunye nokuqinisekisa ukuba umxholo uyahambelana.
ymex 1 kunyaka I-Yandex ibeka le cookie ukuqokelela ulwazi malunga nokuziphatha komsebenzisi kwiwebhusayithi. Olu lwazi lusetyenziselwa uhlalutyo lwewebhusayithi kunye nokuphucula iwebhusayithi.
yuids 1 kunyaka I-Yandex igcina le cookie kwi-browser yomsebenzisi ukuze ibone undwendwe.
Iikuki zohlalutyo zisetyenziselwa ukuqonda indlela iindwendwe ezinxibelelana ngayo nale webhusayithi. Ezi cookies zinceda ukufumana ulwazi malunga nenani leendwendwe, ireyithi ye-bounce (inani leendwendwe ezityelela iwebhusayithi kwaye ngokukhawuleza ziyishiye), ilizwe lemvelaphi yendwendwe, njl.
__iigadi Unyaka o-1 iintsuku I- __gads cookie, esetwe nguGoogle, igcinwa phantsi kweDoubleClick domain kwaye ilandelela inani lamaxesha abasebenzisi ababona intengiso, ilinganisa impumelelo yephulo kwaye ibala ingeniso yayo. Le kuki inokufundwa kuphela kwindawo ebekwe kuyo kwaye ayizukulandelela nayiphi na idatha ngelixa ubrawuza kwezinye iisayithi.
_gu ngenyanga 1 Le cookie imiselwe ngumniki Getsitecontrol. Le kuki isetyenziselwa ukwahlula abasebenzisi.
_ym_d 1 kunyaka I-Yandex ibeka le cookie ukugcina umhla weseshoni yokuqala yabasebenzisi.
_ym_isad iiyure 20 I-Yandex ibeka le cookie ukujonga ukuba isivakashi sinee-ad blockers.
_ym_uid 1 kunyaka I-Yandex ibeka le cookie ukuchonga abasebenzisi besayithi.
i-EU Unyaka o-1 iintsuku Le cookie yeyeRocketfuel kwaye iqokelela iinkcukacha zabasebenzisi abangazichazanga igama lakho kubaphulaphuli ekujoliswe kubo kwaye ikhuphe iintengiso ezenzelwe wena.
ezepv 1 usuku Le cookie isetwa ngumboneleli we-Ezoic ukulandelela ukuba ngawaphi amaphepha athe abonwa ngumsebenzisi.
ezoadgid_1034 imizuzu 30 U-Ezoic usebenzisa le cookie ukurekhoda i-id yobudala bomsebenzisi kunye nodidi lwesini.
ezoref_1034 iiyure 2 I-Ezoic isebenzisa le cookie ukugcina indawo ekubhekiswa kuyo, oko kukuthi, iwebhusayithi ebekuyo, ngaphambi kokuba eze kwiwebhusayithi yangoku.
imvu iseshoni I-cookie ezouspva ibekwe ngumboneleli we-Ezoic kwaye isetyenziselwa ukulandelela inani lamaphepha avakatyelwe ngumsebenzisi lonke ixesha.
imvlvv iseshoni I-cookie ezouspvv ibekwe ngumboneleli we-Ezoic kwaye isetyenziselwa ukulandelela inani lamaphepha avakatyelwe ngumsebenzisi lonke ixesha.
UmsebenzisiID1 iinyanga 3 Le kuki isetwe yi-ADITION Technologies AG, njenge-ID eyodwa nengaziwa mntu undwendwe lwewebhusayithi, ukuchonga abasebenzisi abohlukileyo kwiiseshoni ezininzi.
yabs-sid iseshoni I-Yandex ibeka le cookie ukugcina i-ID yeseshoni.
yandexuid 1 kunyaka I-Yandex ibeka le cookie ukuchonga abasebenzisi besayithi.
Iikuki zentengiso zisetyenziselwa ukubonisa iindwendwe iintengiso ezifanelekileyo kunye namaphulo okuthengisa. Ezi cookies zilandelela abatyeleli njengoko bendwendwela iwebhusayithi kwaye baqokelele ulwazi olubavumela ukuba banikeze iintengiso ezilungiselelweyo.
Ezinye iikuki ezingahlelwanga zibandakanya ezo zihlalutyiweyo kodwa azikabelwa udidi.
_uncedo 1 kunyaka Akukho nkcazo ekhoyo.
active_template::332619 iintsuku 2
appRelease iseshoni Akukho nkcazo ekhoyo.
I-BACKENDID iseshoni Akukho nkcazo ekhoyo.
dspid 1 kunyaka Akukho nkcazo ekhoyo.
ezoab_332619 iiyure 2 Akukho nkcazo
ezoadgid_332619 imizuzu 30 Akukho nkcazo
ezopvc_332619 imizuzu 30 Akukho nkcazo
ezoref_332619 iiyure 2 Akukho nkcazo
ezosuibasgeneris-1 1 kunyaka Akukho nkcazo
ezovid_332619 imizuzu 30 Akukho nkcazo
ezovuuid_332619 imizuzu 30 Akukho nkcazo
ezovuuidtime_332619 iintsuku 2 Akukho nkcazo
ezux_lpl_332619 1 kunyaka Akukho nkcazo
f_001 iinyanga 3 Akukho nkcazo
g_001 1 usuku Akukho nkcazo
gt_auto_switch ngenyanga 1 Akukho nkcazo ekhoyo.
lp_332619 imizuzu 30 Akukho nkcazo
mts_id Iminyaka emi-9 iinyanga ezili-10 ngeentsuku ezingama-8 Akukho nkcazo ekhoyo.
mts_id_last_sync Iminyaka emi-9 iinyanga ezili-10 ngeentsuku ezingama-8 Akukho nkcazo ekhoyo.
pvc_undwendwelo 1 kunyaka Le cookie yenziwe yi-post-views-counter. Le cookie isetyenziselwa ukubala inani lokundwendwela kwisithuba.Ikwanceda ekuthinteleni ukuphinda ukujonga isithuba ngundwendwe.
srp iseshoni Akukho nkcazo ekhoyo.
Isazisi somsebenzisi Iinyanga ze-5 zeentsuku ze-27 Akukho nkcazo
Iicookies eziyimfuneko zibalulekile ukuze iwebhusayithi isebenze ngokufanelekileyo. Eli candelo liqulathe ii-cookies ezenza imisebenzi esisiseko kunye nemisebenzi yokhuseleko yewebhusayithi. Ezi cookies azigcini nayiphi na idatha yobuqu.